Indlela Ukukhutshwa nokukhutshwa kwe-Evaporation kubumba njani iMimoya yethu
Amanzi amaninzi aguqula "I-State" Xa uhamba nge-Atmosphere
Ukunyanzelisa nokukhuphuka kwemimiselo emibini ibonakala kwangaphambili kwaye rhoqo xa ufunda ngeenkqubo zemozulu . Ziyimfuneko ekuqondeni indlela amanzi - ehlala ekhona (ngenye indlela) emoyeni-aziphatha ngayo.
Ukunyanzeliswa yinkqubo eyenziwa ngamanzi ahlala emoyeni utshintsho ukusuka kumphunga wamanzi (i-gas) kumanzi amanzi. Oku kwenzeka xa umphunga wamanzi sele ucolile kwiqondo lokushisa kwezolo, okukhokelela ekuzaleni.
Naliphi na ixesha unomoya ofudumalayo okhuphukela emoyeni, unokulindela ukuxhaswa ekugqibeleni. Kukho imizekelo emininzi yokunciphisa ubomi bethu bemihla ngemihla, njengokwakhiwa kwamaconsi amanzi ngaphandle kwesiselo esibandayo. (Xa isitya sokubanda sishiywa ehleli etafileni, umswakama (umphunga wamanzi) emoyeni wendawo udibanisa nebhotile ebandayo okanye iirazi, ipholile, kwaye iyanciphisa ngaphandle kwesiphuzo.)
Ukunyanzelisa: Inkqubo yokufudumala
Uza kudla ukuva ukukhutshwa okubizwa ngokuba "inkqubo yokufudumala," okungadideka ukususela xa ukulungiswa kuhambisana nokupholisa. Ngoxa i-condensation ipholisa umoya ngaphakathi kwiplasela yomoya, ukwenzela ukuba ukupholisa kwenzeke, loo phasela kufuneka ikhulule ubushushu kwindawo ejikelezileyo. Ngaloo ndlela, xa uthetha ngomphumo wokunciphisa emoyeni jikelele, uyayilumkisa. Nantsi indlela esebenza ngayo:
Khumbula kwiklasi yeklasi ukuba i-molecules kwi-gas iyanamandla kwaye ihamba ngokukhawuleza, ngelixa i-liquid is moved slowly.
Ukuze kulungele ukulungiswa kwemvelo, iamolekyu yamanzi yomswakama kufuneka ikhulule amandla ukuze ikwazi ukuthoba ukunyakaza kwawo. (Lo mandla ufihlakelekileyo kwaye ngoko ke kuthiwa ukufudumala kwelanga.)
Ndiyabulela ukulungiswa kweMimoya ...
Inani leemeko zesimo sezulu esaziwayo kubangelwa ukulungiswa, kuquka:
Ukuchasene nokunciphisa ukuphuma kwamanzi. Ukuphuphuma kwe-evaporation yinkqubo yokutshintsha amanzi amanzi kumphunga wamanzi (i-gas). Ihambisa amanzi ukusuka kuMhlaba ukuya emoyeni.
(Kufuneka kuqatshelwe ukuba iziqulatho ezinjengeqhwa, zingaphinde zitshintshwe okanye zitshintshwe ngqo kwi-gas ngaphandle kokuqala zibe ngumbane. Kulo meteorology, oku kubizwa ngokuba yi- sublimation .)
Ukuphuphuma kwe-Evaporation: Inkqubo yokuKhatya
Ukuze iamolekyuli zamanzi zihambe ukusuka kumanzi ukuya kummandla okhupha amandla, kufuneka ziqale zifumane amandla okushisa. Benza oku ngokubhikisana namanye ama-molecule yamanzi.
Ukuphuphuma kwe-Evaporation kuthiwa "yinkqubo yokupholisa" kuba isusa ubushushu obuvela emoyeni ojikelezayo. Ukunyuka kwe-evaporation emoyeni kuyisinyathelo esibalulekileyo kumjikelezo wamanzi. Amanzi omhlaba womhlaba aya kuphazamiseka emoyeni njengoko amandla amanzi angenawo amanzi. Amamolekyuli wamanzi ekhoyo kwisigaba samanzi ahamba ngokukhululeka kwaye akukho ndawo echanekileyo. Xa amandla athe wongezwa kumanzi ngobushushu obuvela elangeni, izibopho phakathi kwamamolekyuli wamanzi zifumana amandla omzimba okanye amandla. Emva koko babalekela umbane wamanzi kwaye baba yi-gas (umphunga wamanzi), oya kwenyuka emoyeni.
Le nkqubo yamanzi iphuma ephahleni yoMhlaba iqhubeka rhoqo kwaye ihlala ihambisa umphunga wamanzi emoyeni.
Izinga lokukhuphuka lixhomekeke kwiqondo lokushisa lomoya, isivinini somoya, ukukhanya.
Ndiyabulela u-Evaporation kule Mimoya ...
Ukuphuphuma kwe-Evaporation ixanduva lwezinto ezininzi zemozulu, eziquka:
Isikhokelo Sokufunda Isimo Sezulu Esiqinileyo
Yintoni Umlilo Wezulu?
Umthetho ovelele: Indlela iNASA egcina ngayo ii-Shuttles zayo ifomu elikhuselekile ifomu
Indlela Ubomi Bakho Bokuba Ngamanzi Njengesimo se-Weathervane
Yintoni i-Biological or Organic Weathering Rocks?
Kutheni Kukho Ukuqhwala Kwemitsalane?
Iimpawu ezingapheliyo ngeSpanish